Ngamanyathelo ayi-3 kuphela afunekayo ukuze uye kwiholide yakho elandelayo
Qalisa ngokubuka Iindawo okanye Izinto Ezinokonwatyelwa. Faka izihluzi ezifana nezindlu ezipheleleyo, ukuzingenela okanye iindawo ezivumela izilwanyana ukuze ubone ezi zinto uzifunayo. Ungagcina ozithandayo kwizinto ozibawelayo.
Xa uyifumene into oyifunayo, funda ngombuki zindwendwe wakho, funda izimvo zendwendwe zexesha elidlulileyo uze ujonge iinkcukacha ngeendlela zokurhoxa—emva koko ubhukishe ngokucofa nje amaqosha ambalwa.
Yonke into ilungile! Qhakamshelana nombuki zindwendwe wakho nge-app ukuze ufumane amacebiso ngezinto zasekuhlaleni okanye ukuba unemibuzo. Ungaqhakamshelana noAirbnb nanini na ukuba udinga uncedo olungakumbi.
Nokuba uyaphi, sikhona ukuze sikuncede
Impilo nokhuseleko zezona zinto zibalulekileyo
Ababuki zindwendwe bazibophelela kwimigaqo yokucoca ephuculiweyo yeCOVID-19 kwaye izindlu zinikwa umlinganiselo wokucoceka.
Iindlela zokurhoxa ezingakumbi onokukhetha kuzo
Ababuki zindwendwe banokufaka iindlela zokurhoxisa ezibhetyebhetye ezahlukeneyo ezicaciswe kakuhle xa kubhukishwa.
Ufumana uncedo nanini na, imini nobusuku
Kuba sinabantu bokunceda abathengi emhlabeni wonke emini nasebusuku, sikhona ukuze sikuncede nanini na udinga uncedo.
Ukulungele ukuqalisa ukukhangela?
Kuyafuneka ndidibane nombuki zindwendwe wam?
Izinto onokukhetha kuzo ezifana nokuzingenela okanye ukubhukisha indlu yonke zikuvumela ukuba amaxesha amaninzi uqhakamshelane nombuki zindwendwe wakho ngokuthumela umyalezo nge-app—ungamthumelela umyalezo nanini na ukuba kukho into evelayo.
Wenza ntoni uAirbnb ngeCOVID-19?
Fumana inkcazelo yakutshanje ngendlela yethu yokumelana neCOVID-19 nezinto eziluncedo zendwendwe, kuquka iipolisi ezihlaziyiweyo, imiqathango yohambo, iindlela zokuhamba ezibhetyebhetye, nokunye. Funda okungakumbi
Kuza kwenzeka ntoni ukuba ndifuna ukurhoxa ngenxa yengxaki yendlu okanye nombuki zindwendwe?
Kwiimeko ezininzi, ungalungisa naziphi na iingxaki ngokuthumelela umbuki zindwendwe wakho umyalezo oya kuye ngqo. Ukuba akakwazi ukukunceda, vele nje uqhakamshelane noAirbnb zingekapheli iiyure eziyi-24 uyifumanisile ingxaki. Funda okungakumbi
Iza kutsalwa nini imali xa ndibhukisha indawo?
Imali iza kutsalwa kwangoko xa ukubhukisha kwakho kuqinisekisiwe, kodwa imali asiyidluliseli kumbuki zindwendwe ide ibe ziyure eziyi-24 emva kokuba ungenile ukuze ube nexesha lokuqinisekisa ukuba yonke into iyilento ubuyilindele. Funda okungakumbi
Ndingenza njani ukuze ndibe ngumbuki zindwendwe?
Phantse nabani na angangumbuki zindwendwe wendawo okanye into enokonwatyelwa. Awubhatali mali xa uvula iakhawunti uze ubonise umhlaba wonke indawo yakho okanye ubuchule bakho. Ukuze uqalise, yiya Kwiziko lethu Lababuki Zindwendwe. Funda okungakumbi
Ufuna inkcazelo engakumbi?
Yiya Kwiziko lethu Loncedo ukuze ufumane iimpendulo ezingakumbi zemibuzo yakho. Funda okungakumbi